के नयाँ भेरिअन्टकाे भाइरसका लागि अहिलेकाे खाेपले काम गर्ला ? – Bishwo Ghatana – World News
के नयाँ भेरिअन्टकाे भाइरसका लागि अहिलेकाे खाेपले काम गर्ला ?
By विश्व घटना	 On २८ असार २०७८, सोमबार ११:५३
सबै भाइरस प्राकृतिक रूपमा नै उत्परिवर्तित हुने गर्छन्। सन् २०२० को प्रारम्भमा सार्स-कोभ-टुको पहिलो पटक पहिचान गरिएपछि हजारौँ उत्परिवर्तन देखा परेका छन्।
त्यसरी उत्परिवर्तित भएका भाइरसहरूलाई भेरिअन्ट भनिन्छ। अधिकांश परिवर्तनमा थोरैदेखि कुनै प्रभाव देखिएनन्। तर आक्कलझुक्कल कुनै पनि भाइरस उत्परिवर्तित हुँदा त्यसले यसलाई जीवित रहन र थप भाइरस जन्माउन मद्दत गर्छ।
विश्वभरका विज्ञहरूले भाइरसमा देखा परेका परिवर्तनलाई सरकारहरूले उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकुन् भनेर सार्स-कोभ-टुको विकासक्रमलाई अनुगमन गरिरहेका छन्।
विज्ञहरूले मुख्य रूपमा चारवटा सार्स-कोभ-टुका भेरिअन्टलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। तीनमा यूकेमा सबैभन्दा पहिले देखा परेको अल्फा भेरिअन्ट, दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको बीटा भेरिअन्ट, ब्रजिलमा पहिले देखा परेको गामा भेरिअन्ट र भारतमा देखा परेको डेल्टा भेरिअन्ट छन्।
डब्ल्यूएचओलेले यी सबै भेरिअन्टहरूलाई जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम देखिएका कारण चिन्ताका भेरिअन्टको सूचीमा राखेको छ। कैयौँ देशहरूमा यी भेरिअन्ट पुगिसकेकाले तीनले समूहमा सङ्क्रमण फैलाएकाले पनि तीनलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
अध्ययनहरूले सार्स-कोभ-टुका नयाँ भेरिअन्टविरुद्ध पनि खोपहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने देखाएको छ। तर सुरुमा देखिएको कोरोनाभाइरसभन्दा नयाँ भेरिअन्टमा मुख्य गरी पहिलो डोजपछि खोपहरू कम प्रभावकारी देखिएका छन्।
पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डले गरेको एउटा अध्ययनले फाइजर वा आस्ट्राजेनेकाको एउटा खोपले डेल्टा भेरिअन्टविरूद्ध ३३ प्रतिशत सुरक्षा दिने पाइएको थियो। अल्फा भेरिअन्ट विरुद्ध त्यो सुरक्षा ५० प्रतिशत थियो।
दोस्रो मात्रा लगाएपछि फाइजरबाट ८८ प्रतिशत र आस्ट्राजेनेकाबाट ६० प्रतिशत सुरक्षा पाइएको थियो। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अलग्गै अध्ययनले भारतमा पहिचान गरिएको डेल्टा र कापा भेरिअन्ट विरुद्ध फाइजर र आस्ट्राजेनेका दुवै खोप प्रभावकारी रहको पाइएको थियो।
खोपहरू शत प्रतिशत प्रभावकारी नभएकाले भेरिअन्टहरूका कारण मुख्य गरी एउटै मात्र मात्रा खोप लगाएका मानिसहरू अस्पताल जानुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउने अवस्था आउनसक्ने अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले जनाएको छ।
सीडीसीका अनुसार अमेरिकीमा जुन १४ सम्म खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका १४ करोड ४० लाख मध्ये ३७ सय २९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो भने ६७१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। द्रुत ढङ्गले डेल्टा भेरिअन्ट विस्तार भएपछि इङ्ग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र नर्दर्न आयरल्यान्ड सरकारले बढी उमेर समूहलाई दिइने खोपको पहिलो र दोस्रोमात्रा लगाउने अवधि घटाएका छन्।
अब ४० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूले आठ हप्ताको अन्तरमा दोस्रो खोपको लागि समय लिनसक्नेछन् र सप्ताहान्तमा पनि खोप लगाइनेछ। यसअघि १२ हप्ताको समय सीमा राखिएको थियो। भारतमा देशको कुल जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशत भन्दा कमले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। जम्मा १८ प्रतिशतले पहिलो मात्रा लगाएका छन्।
त्यही भएर विज्ञहरूले डीएनए सिक्वेन्सिङ भनिने विधिबाट भाइरसको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। त्यसो गर्दा भाइरसका नमुनाहरूमा आनुवंशिक परिवर्तनहरूको पहिचान गरिन्छ। कतिपयले सङ्क्रमण घटाउन आवश्यक सुरक्षाका कदमहरू चाल्नुपर्ने र महामारीसँग जुझ्न दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छोरी जन्माउने बुहारीलाई सासुले दिइन् महँगाे कार3views